SPC Dickens Chiedza Pro - Iyo yakanaka isingadhure imwe nzira [Ongororo] | Vese eReaders
Michael Hernandez | | vaverengi, Hardware
SPC ichiri mutambi mumwe chete mune ino e-book musika inoratidzika kunge yakadyiwa neAmazon neKobo ikozvino kuti BQ yabuda zvachose mumutambo. Nechikonzero ichi, SPC yafunga kuzadza iro gaka rakasiiwa neSpanish brand nekuda kupa zvigadzirwa zvinokwikwidza zvakananga maererano nekukosha kwemari nevakwikwidzi.
Isu tinotarisa zvakadzama kune itsva SPC Dickens Chiedza Pro, inokwanisika imwe nzira ine akawanda maficha emhando yepamusoro. Nenzira iyi, SPC inogogodza pamusuwo wevashandisi vebhuku remagetsi kuti vayeuchidze kuti kuchine dzimwe nzira dzinopfuura dzenguva dzose, tinozviongorora kuti iwe uzvizive.
2 Memory uye basic yekubatanidza
3 Ratidza uye mushandisi interface
5 A "yemahara" chivharo, sarudzo yakanaka
Panyaya yezvigadzirwa, iyi SPC Dickens Light Pro haisi kure nedzimwe nzira dzakapihwa neAmazon, semuenzaniso, isu tine matt nhema epurasitiki inopedzisa iyo mune iyi kesi inodzivirira nyore mafingerprints, chimwe chinhu chataifarira, nekuti isu hatifanirwe kunetseka nezvazvo. kugara uchichenesa mudziyo. Kwazvo, kumusana ine nhevedzano ye micro-perforations inobatsira zvose kubata uye kuchenesa mudziyo, chinhu chatakambotaura kare.
Vipimo: 169 X 113 x 9 mm
Weight: 191 gramu
Isu tine inoshamisa yakaderera furemu, mukati mayo mune bhatani repakati rinotitora takananga kune yekutanga menyu yemushandisi uye kuti kutendeseka, tichifunga kuti pani yekubata, haiite seyakanyanya kukosha. Kune chikamu chezasi pane bhatani re "simba" iro, kune rumwe rutivi, idiki, sarudzo yekugadzira yandinoona yakaoma kubata. Kuruboshwe kwe "simba" bhatani tinowana slot ye microSD makadhi uye pakupedzisira iyo microUSB yekuchaja chiteshi. Izvo hazvitauri, zvisinei, chero rudzi rwekupokana kumvura kana splashes, chimwe chinhu chakajairwa chezvigadzirwa mumhando iyi. Zvikasadaro compact uye lightweight chigadzirwa.
Memory uye basic yekubatanidza
Chikamu che8 GB chemukati ndangariro iyi SPC Dickens Chiedza Pro, zvinopfuura zvakakwana kune akajairwa mushandisi, asi isu tinofanirwa kuyeuka kuti isu tinokwanisa kuwedzera iyi ndangariro, pamwe nekudyidzana nezviri muReader, kuburikidza nekadhi chiteshi. Micro SD. Pasinei neizvi, kugadzirisa zviri mukati hakusi nyore sezvazviri kuburikidza ne microUSB port inotibvumira kuita pasina chero rudzi rwe software, zviri nyore sekukwevera mabhuku edu kundangariro yemukati uye anozoratidzwa mubhuku.
Mafomati anotsigirwa: EPUB, PDF, JPG, PNG, GIF, TXT, RTF, FB2, MOBI, CHM, DOC.
Muchikamu chino hatina matambudziko sezvo tichigona kuona maPDF semavara akajeka kuti tiwirirane nawo zviri nyore. Muchikamu chino SPC Dickens Light Pro yakanyatsoshanda nekuda kwekushayikwa kwezvirongwa zvinonetesa kana zvisingakwanisi kune avo vanongoda kutambisa maminetsi mashoma kuunza mabhuku avo mubhuku remagetsi uye kutanga kuverenga. chimwe chinhu chekutenda nacho panguva ino.
Ratidza uye mushandisi interface
Tine ingi yemagetsi (inogona kunge yakagadzirwa neAmazon) ine yakagadzikana uye yakanaka yekuzorodza mwero neKindle neKobo pamutengo mumwe chete. Kune chikamu chayo, ine mwenje ine nhanho nhanhatu dzekusimba dzakakwana panguva imwe chete iyo isu tinogona kutogadzirisa kudziya kwemwenje uyu, mashandiro ayo akawanda uye akawanda eReaders zvishandiso ari kuwedzera munzira yakajeka yakanyorwa naKobo kare.
Kugadzirisa: 1024 x 758 pixels
Kuwandisa: Anenge mazana matatu epixels pa inch
Mushandisi wekushandisa Ichatitendera kugadzirisa mazinga akasiyana ehukuru hwefonti, pamwe nekuwedzera maPDF, gadzirisa mapeji, tora mukana weduramazwi uye hongu kuverenga wakatwasuka kana wakatwasuka pane chikumbiro chemushandisi.
Raibhurari manejimendi nemaforodha
Decent file history
Tsvaga uye markup mukati memavara
Kana iri iyi mushandisi interface, pasina kuve yakatsanangurwa semakwikwi, iyi SPC Dickens Chiedza Pro haina kushaya mabasa makuru.
Iyi SPC Dickens Chiedza Pro ine 1.500 naRaama bhatiri ane hurema hwakanyanya huri mutoro kuburikidza ne a microUSB port, Pfungwa isina kunaka tichifunga nezve kuburitswa kwechigadzirwa uye chokwadi chekuti USB-C yatove chiyero cheindasitiri. Nekudaro, anongopfuura maawa maviri echaji yakazara uye anosvika mazuva makumi matatu ekuzvimiririra zvichienderana nekushandiswa, kusimba kwechiedza uye marongero. Panyaya iyi, mazuva makumi maviri ekuzvitonga anowanikwa nekuzvitonga kuzere. Isu hatina, nezvikonzero zviri pachena, chero mhando yekuchaja isina waya uye iyo adapta yemagetsi haina kubatanidzwa mupakeji.
A "yemahara" chivharo, sarudzo yakanaka
Nguva zhinji neEReaders zvinoitika kwatiri sekunge nenharembozha, isu tinofanirwa kutenga zvivharo, kunyanya kana aya eReaders achizoshandiswa kutsika mumugwagwa, kunyanya kuchengetedza skrini. Ndinogara ndichikurudzira kuti usatenga chivharo kana uchizoverenga kumba chete, asi kana uchizoitora inenge inosungirwa.
Panguva ino, iyo SPC Dickens Chiedza Pro inosanganisira yakaomesesa kesi kumusana inonzwa segirovhosi, inoperekedzwa neyakabudirira kwazvo simile-dehwe remagineti kavha, iyo isinganyanye kukanganisa huremu hwechishandiso uye yakanyatsogadzikana. Mamwe mabhureki anofanirwa kufunga kusanganisira aya mavhavha madiki, ayo mutengo wekugadzira unofanirwa kuve mushoma, neiyo chigadzirwa kurongedza kugadzira chiitiko chakazara chinotibvumira, sezvazvakaita neiyi SPC Dickens Light Pro, kunakidzwa nechishandiso zvakananga. pasina chikonzero chekutenga zvakawanda.
Panguva ino takatarisana neSPC Dickens Light Pro, chigadziri chinowanzove chine zvishoma online stock (tinofungidzira kuti nekuda kwenhamba yepamusoro yekutengesa) uye inopihwa nemutengo we 129,90 euros pane yepamutemo SPC webhusaiti nekutakura kwemahara kunosanganisirwa. Kwavanenge vaine stock iri paAmazon, ichipa mutengo weanenge 115,00 euros, saka isu tinokurudzira kuti usarudze pachena iyi poindi yekutengesa.
Kana iwe uchida kutiza zvakajairwa uye kutenderedza chiitiko neicho chivharo chakasanganisirwa, iwe une ese maficha epakati-renji, uchiwedzera yakareruka mushandisi interface uye mukana wekutonga raibhurari yako pasina mipimo pamutengo wemusika.
Dickens Chiedza Pro
Zviri nyore kushandisa neraibhurari
Hunhu hwakanaka huzhinji
Kuiswa kwebhatani kunondinetsa
Yakazara nzira kuchinyorwa: MaReaders ese » Hardware » SPC Dickens Chiedza Pro - Yakanaka isingadhure imwe nzira [Ongororo]